Nei iwe uchifanira kushambadza yako data Analytics maitiro - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Big Data Analytics, Dhata Sayenzi
Dzimwe nguva masangano anorwira kushandura kunyange diki dhata kuita ruzivo runobatsira. Iyo inova ino mhanyisa nzira yemasangano kubata avo data nenzira yakarongeka. Dzimwe nguva ivo havakwanise kuunganidza, kuongorora pamwe nekugadzirisa dhata sezvo ivo vari mubishi nemamwe mabasa zvakare. Kuongorora kwedhata chikamu chakakosha chesangano. Masangano anofanirwa kuchengetedza zvakafanira marekodhi uye kugadzirisa data kuitira kuti vatore sarudzo nekukurumidza uye zvine mutsindo mukuvandudza bhizinesi ravo.
Kuongorora dhata inzira yekutora, kuongorora, uye kuongorora data kuitira kuti uwane ruzivo rwakakosha uye mhedzisiro yekutora sarudzo zvine mutsindo. Kuongorora kwedhata kiyi yekuwana njere inotyaira zvirinani sarudzo dzebhizinesi. Mumashoko akareruka, kuongororwa kwedata ndiko kududzira data kuita ruzivo rwakakosha. Kune mhando dzakasiyana dze data dzakadai sehuwandu uye data rehunhu iro muongorori wedata anoshandisa kuongorora. Vaongorori veData vanounganidza data kubva kwakasiyana masosi uye vozoongorora uye voongorora data kuti vadudzire ruzivo rwakakosha uye mhedziso
Huwandu hwe data iri data iro rinogona kuyerwa kana kunyorwa pasi muhuwandu hwenhamba. Semuenzaniso kukwirira, saizi, kureba, mutengo, nzvimbo, vhoriyamu, hunyoro, tembiricha etc.
Inobata neruzivo, hunhu hwerondedzero nezvimwe izvo zvinogona kucherechedzwa asi hazvigone kuyerwa. Semuenzaniso ruvara, kuravira, kunhuwidza, magadzirirwo, nezvimwe.
Ndiyo data inounganidzwa nemuongorori kana muongorori kekutanga. Iyi data inounganidzwa nemuongorori pachake. Iwo masosi ekuunganidza ekutanga data ari emibvunzo, ongororo, kubvunzurudza, uye kuongorora.
Ndiyo data iyo yatovepo uye muongorori kana muongorori anoshandisa iyi data kuongorora data. Iwo masosi ekuunganidza sekondari data imishumo, majenali, nhau, mabhuku, magazini nezvimwe.
Kuongorora kwedhata ibasa rakakosha sezvo zvichibatsira mukuita sarudzo uye kufungidzira kukura kwemusika wekambani. Dhata analytics inova yekumhanyisa uye inonetesa maitiro emabhizinesi sezvo ari marefu maitiro uye anoda kutarisisa kwakazara uye ruzivo nezve imwe ndima. Ndicho chikonzero icho makambani anosarudza kushandisa data analytics kuongorora yakawanda data. Vanoongorora dhata vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzehunhu uye huwandu kuti vawane musika uye vatengi ruzivo.
Nhasi, mazhinji emasangano ari kuona zvakanakira uye purofiti yekubuda kunze data analytics services. Dzimwe nguva kushomeka kwehunyanzvi zviwanikwa zvevanhu uye hunyanzvi hunotyaira makambani kuenda kunotsvaga data analytics. Izvo zvakanakira dhata rekuongorora kutsvagisa zvinokurudzira masangano kuti awane misika uye ruzivo rwevatengi uye voita sarudzo dzebhizimusi zvine hungwaru pahwaro hwedatha analytics ripoti.
Mamwe mabhenefiti ekutsvagisa data analytics akataurwa pazasi.
Dhipatimendi rakazvitsaurira revanyanzvi ve data
Kunyangwe iwe uchinge uine vanhu veIT kana vaongorori mumudonzvo wako, zvakadaro pane mikana yekuti vanogona kunge vachiita mamwe mabasa avakapihwa kana dzimwe nguva zvinoitikawo kuti vanogona kuvhiringidzika neimwe data kana ruzivo uye vangatadze tarisa pane analytics yedata. Nekudaro, kuitira kuti udzivise njodzi iyi, unofanirwa kuburitsa sevhisi yekuongorora kuitira kuti isunungure chako chemukati sosi. Iyo yekutsvaga kambani ichakupa iwe yaunoda mhedzisiro uye yakakodzera data ongororo yekambani yako.
Nyanzvi Data management: - Kuburitswa kwedata analytics vamiririri kunoona kwakakodzera uye kwakarongeka manejimendi, kuronga nekuchengetedza dhata rako rakakosha pane akawanda mapuratifomu.
Kana iwe uchitsvaga Ongororo yeData kune rako bhizinesi uye usina chokwadi chekuti ungaiendesa sei kumberi, ita zvekutaurirana.